SUMCAD DHAWRKA GANACSIGAAGA (Qaybtii 2aad) – Qalinka: Axmed Muuse Ismaaciil.
Tuesday June, 19 2018 - 15:30:26
Wednesday March 22, 2017 - 15:29:44 in by Super Admin
Ganacsigu waxa uu loolan adag kula jiraa baayac-mushtari kale oo asaaggii ah.
waxa ay ku beretamaan sida ay u kala jiidan lahaayeen macaamiisha iyo sida ay qiimo dheeri ah ugu yeeli lahaayeen badeecadda ama adeega ay hayaan. dariiqa ay u maraan kasbashada macaamiisha wax ugu mudan qancinta iyo duufsiga , ha ahaadaan cidda wax ka iibsata ama kuwa ay iyagu wax ka soo iibsadaane.
Kasbashada iyo jiidashada bulshadu waa dirirta ugu xanafta kulul ee damaqda cidda liddiga ku ah ganacsigaaga. waxa loo adeegsadaa farsamo ay qabtaan xubno si adag u laylisan oo ganacasiga u shaqeeya.
Maaha oo keliya xoojinta xidhiidhka u dhexeeya dadweynaha iyo ganacsiga in uu ku ekaado garawshiiyaha iyo qancinta bulshada ee waxa ay naafaysaa oo ay curyaamin weyn u geysataa meheradaha aad isku jaadka tihiin ee kula tartamaya,
Asluubka qancinta dadweynaha waxa aad loogu adeegsadaa xilliyada dagaalada qadhaadh ay dhex maraan laba daraf oo iska soo hor jeeda. Duullaankii maraykanka ee Sep. 2001 , waxa uu cayn wareejiyay qaanuunkii dagaalada dunida ee soo jireenka ahaa. Dirirtan waxa ay dhex martay quwaddii iyo qarankii dunida ugu xoogga weynaa, iyo cid aan hoy ama baro ay degan yihiin iyo qaran meel ku sugan midna lahayn, hu’ midaysan oo lagu gartona aan lahayn; Al-qaacida, oo uu hogaamiye ka ahaa maal-qabeen sucuudi ah; Osama bin Laadin.
Hubka keliya ee Osaama sida farshaxanimada ah u adeegsaday waxa uu ahaa xoojinta xidhiidhka bulshada, waxa uu isticmaalay cajalado fiidoow ah oo gaagaaban oo sida farriimo kulkul oo uu uga dan lahaa laba qodob; in uu taageerayaashiisa xiisad , xamaasad iyo dardar geliyo iyo in uu yaxyax-geliyo cadowgiisa.
Osaama waxa uu adeegsaday hub ka culus qumbuludaha uu tuuray maraykanku oo uu ku duufsanayey kumanaan dadweyne dunida ku nool isaga oo ku qancinayey dagaalka cidda ku jirta iyo dhinaca xaqa ama sawaabka ku taagan. inkasta oo uu afartii sanno ee ugu horreeyay farrimah uu soo gudbinayey ku baxayeen af-carabi, waxa ay Al-qaacida raadisay weji labaad oo ay farriimahani ku gaadhaan dadka reer galbeedka ah.
2005 tii ayaa la arkay muuqaal Fiidyoow ah oo ku daldalmaya Af-ingiriisi kaas oo gilgilay shacabka reer galbeedka. Tv.ga ABC ayaa isaguna baahiyey cajalad Al-qaacida soo tebisay oo uu ka hadlayo wiil ku gaadhan qoriga AK-47, oo ku hadlaya Af-ingiriisi dhalad ah. arrintan waxa ay cabsi weyn ku abuurtay bulshadii reer galbeedka oo iyadu ooshey meel ka durugsan goobta ay dirirtu ka socotay, waxaana ay guryihii maxasta , caruurta iyo rayidku joogeen gaadhay farriimaha nacaybka iyo colaada ee Al-qaacida iyo cabsida dagaalkan aan dhammaadka lahayn.
Waa xirfada kasbashada iyo xidhiidhka oo raadkaas weyn ku yeelatay dagaalkii mawjadda ahaa ee labada daraf u dhexeeyay. Haddaba, haddii warkaagu uu meel dheer gaadho oo taabto cid kasta oo aad danaynayso in uu ganacsigaagu raad ku yeesho, kolkaana aad ku qanciso in ay ku xidhmaan, waxa uu u baahan yahay xirfad tabo-baran iyo Af ay fahmi karaan duulka farriintaadu ku wajahan tahay.
Waxaana mudan qofka kuu hawl-gelinaya shaqadan culus ee xidhiidhka bulshadu iyo kor u qaadka sumcadda ganacsigaaga in laga helo tilmaamahan soo socda:
1) Waayo-aragnimo geeso badan
3) Af-tahanimo iyo xidhiidh curin
4) Cilaad dhalin
5) in-dheer garad oo feejig
6) Dun iyo dadnimo leh
7) Koox ku shaqayn kara (wadar la joog leh)
Sidoo kale waa in qofka Af- hayeenka ganacsigu yaqaano xirfadah uu sahlaya in uu la jaanqaado hawshan baaxadda leh ee gancisgaaga tahan dheer gaadhsiin kara ; waxaana ka mid ah:
1) In uu yeesho aqoonta xidhiidhka bulshada
2) xirfadda warbaahinta , xog-raadinta iyo isticmaalka media
3) Tacliin u leh Tegnoolijiyadda
4) Xeel-dheerida dhaqanka, afka, suugaanta, dhaqaalaha , siyaasadda iyo taariikhda
5) Aqoonta ganacsiga
6) Hanaanka maamulku ku go’aan qaato iyo saamaynta ay leedahay culayska maamulka ganacsigu